မမေ.အပ်သည်.နေ.ထူးနေ.မြတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မမေ.အပ်သည်.နေ.ထူးနေ.မြတ်
Posted by မောင်ဖိုးတီ on May 14, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ
တခူးလတုန်းကတော. အားလုံး ပို.စ်တွေတင်ခဲ.ကြသလို ကဆုန်လကိုလဲ မမေ.သင်.ဘူးထင်လို. တင်ပြပေးတာပါ အမှားပါခဲ.ရင် ထောက်ပြပြင်ဆင်ပေးပါ လို. ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်…..။
ကျနော်တို.ရဲ. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗျာ, ဖွား, ပွင့်, စံ၊ ဤလေးတန်၊ မှန်ရန် ဗုဒ္ဓနေ့… ဟူသော ဗုဒ္ဓ၀င်သီတံအရ
ကဆုန်လကို ပုဂံခေတ်က ကုဆုန်၊ ကူဆုန်၊ ကဆုန်၊ ခူဆုန်၊ ခုဆုန်ဟု အမျိုးမျိုးရေးသား ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာကို ကျောက်စာများအရ သိရှိကြပါတယ်။ ကုဆုန်မှာ မူရင်း ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး ကဆုန်စသော ကျန်ဝေါဟာရများမှာ ကုဆုန်မှ ရွှေ့လျားပြောင်းလဲလာသော ဝေါဟာရများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုဆုန်နှင့် ကဆုန်တို့ရှိ ကု၊ က ပုဒ်တို့မှာ ကုတို့၊ ကုခန်း၊ ကစွန်း၊ ကညှို့၊ ကတောက် စသော ဝေါဟာရတို့ရှိ ကု၊ က ပုဒ်တို့ကဲ့သို့ “ရေ” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါ တယ်။ စုန်မှ ဆင်းသက်လာသော ဆုန်မှာ သွန်းခြင်း၊ လောင်းခြင်း၊ ဖျန်းခြင်း အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ကဆုန်လ အဓိပ္ပာယ်မှာ ရေသွန်းသောလ၊ ရေလောင်းသောလ၊ ရေဖျန်းသောလ ဟုဆိုလိုပါတယ်။ထို့ ကြောင့် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရား သစ္စာလေးပါး မြတ်တရားကို ပိုင်းခြား ထင်ထင် သိမြင်တော်မူရာ မဟာဗောဓိပင်ပွား ဗောဓိပင်များကို ရေသွန်းလောင်းခြင်းရ ဖြစ်ပါသည်…။
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကိုးကွယ်နေကြသော ဂေါတမ ဘုရားရှင်သည် သုမေဓာ ရှင်ရသေ့ဘ၀တွင် ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားထံတော်မှ “နောင်သောအခါတွင် ဘုရားစင်စစ် ဧကန်အမှန် ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု နိယတ ဗျာဒိတ်ကို ရရှိတော်မူခြင်းသည် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာသက္ကရာဇ် (၆၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့မှာပင် ဘုရားအလောင်းကို ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားအလောင်းကို ဖွားမြင်တော်မူသည်နှင့် တပြိုင်နက် ယသောဓရာ မင်းသမီး၊ အာနန္ဒာမင်းသား၊ ဆန္ဒအမတ်၊ ကာဠုဒါယီအမတ်၊ ကဏ္ဍကမြင်း၊ ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးနှင့် မဟာဗောဓိပင် ဟူသော ဖွားဖက်တော် ခုနှစ်ဦးတို့သည်လည်း ဖွားမြင်ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။မဟာဗောဓိ သည် မဇ္ဈိမဒေသ ဥရုဝေလတောတွင် ဘုရားရှင်တို့ ပွင့်တော်မူရာ ဗဟိုအချက်အချာ အောင်မြေအရပ်၌ ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာချစ်သူ ဆိုဒ် မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်..။
Yes,we must know the special day of our Buddha,the Buddha Day.
Thanks for sharing this blog to all,cos’ i don’t know much about of it before.
Now,i know.Share more about of it if you have anymore facts about that day.
ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။
အဲ့ဒီနေ့ ဘုရားသွားဖို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်းထားတယ် … တွေ့ရင်လည်း လှမ်းခေါ်ကြဦးနော် ..
ချစ်သူများနေ့ ဆို အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်တွေ..
တစ်ကယ်ကို မမေ့အပ်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ပါဗျာ..
ဗုဒ္ဓရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်မှာ ရွာသူရွာသားပေါင်းတို့လည်း မိမိတို့ တတ်နိုင်သည့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတရား များ၊ကုသိုလ်ကောင်းမူများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။
ဒီနေ့ စီးတီးအက်ဖန် ကနေပြီးတော့ မင်္ဂလာတိုက် ဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဥပုတ်သီလ စောင့်ထိန်းဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။
ဆူးကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ရွာသားများလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ဥပုတ်စောင့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဖြူစင်တဲ့ သီလ နဲ့ နေနိုင်ကြပါစေ။
နောက်ထပ်တစ်နေ့ ကျန်ပါသေးတယ်….ဗျာဒိတ်ခံယူတော်တဲ့နေ့ ကလဲကဆုန်လပြည့်နေ့ ပါပဲ
ဆူးရေ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ထင်တယ်။ ဥပုတ် မဟုတ်ပါ။ ဥပုသ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မှားခဲ့ဖူးတာမို့)
ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ မဟုတ်ပါဘူး မသိကို မသိတာပါ။ပြင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။